Shiinaha ahama Steel Ferrule Xarig mesh la warshad Xoog Great iyo alaab | Boegger
Aad u debecsan ahama Steel Ferrule Xarig mesh
Nooca Ferrule mesh mesh wuxuu leeyahay sifooyin jireed oo la mid ah sida loo xidho mesh-ka, laakiin qaab isku dhafan oo kala duwan - Feerooyin aan kala go 'lahayn oo isku xidha fiilooyinka si ay u samaystaan ​​dhar bir adkeysi leh oo leh godad rhombus ah. Meshkan jilicsan ayaa si quruxsan ula qabsanaya mashaariicdaada adag ee 3-D iyo codsiyada kala duwan ee ku saabsan faa'iidooyinka soo socda:
Waxyaabaha Ferrule: naxaasta daasadaysan, naxaasta la mariyey ee nikkel, bir birta ah ama aluminium.
Qalabka fiilooyinka: birta siligga sare leh ee birta AISI 304, 304L, 316, 316L.
Cabbirka dheemanka: 20 mm ilaa 200 mm.
Dhexdhexaadiyaha fiilada: 1 mm ilaa 4 mm.
Heerka: u hoggaansamida dhammaan gobollada iyo xeerarka dhismaha qaranka markii aad codsato.
Naqshadeyn kasta iyo cabbirro gaar ah ayaa la heli karaa.
Mesh xarig Ferrule ka hor inta aan la kala bixin
Mesh xarig Ferrule ka dib markii la fidiyay.
Miisaan fudud iyo dabacsanaan sare.
Ahama mesh xarig ferrule mesh waa iftiin, iyo ballac, dherer, dhexroor xarig iyo cabirka furitaanka waa la beddeli karaa. Waxaa intaa dheer, qaabab qaabeed iyo qaab aan caadi ahayn ayaa sidoo kale loo heli karaa. Markaa birta birta ah ee birta birta ah ee birta ah waa u fududahay in la rakibo xaalad kastoo jirta waxaana si ballaaran looga isticmaalaa meelo badan.
Awood sare, u adkeysata daalka iyo saameynta.
Ferrules waxay si adag isugu daraan xargaha birta ah ee birta ah, iyagoo ka dhigaya mesh qaab xoog badan. Sidaa darteed, birta mesh xargaha birta birta ah waxay u adkeysataa daal iyo saameyn.
Dhismaha xariggu waa 7 × 7 ama 7 × 19, taasoo ka dhigaysa birta birta ah ee birta birta ah mesh aad u jilicsan. Sidaa darteed, waa la qaloocin karaa oo si fudud ayaa loo laabi karaa, taas oo ka dhigaysa mid aan dadaal lahayn in la qaado. Hantidan sidoo kale waxay fududeyneysaa rakibideeda. Iskusoo wada duuboo, ma dhaawici doonto gacmaha.
Fiican-miridh-caabbinta, dib loo warshadeyn karo oo waara.
Birta birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah ayaa laga sameeyaa 304, 316, 304L ama 316L, sidaa darteed waxay u adkeysataa miridhku. Cimrigeedu wuxuu noqon karaa in ka badan 30 sano natiijada.
Aragti heer sare ah iyo muuqaal weyn.
Qalabka birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah ayaa leh furitaanno iyo qaabab u eg dheeman, taasoo ka dhigaysa aragti weyn iyo muuqaal qurxoon. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa sida shimbiraha aviaries, xero xayawaan, baqashada xayawaanka, dhismaha qurxinta iwm. Iyo birta birta ah ee birta ah ee birta ah lafteeda waa muuqaal weyn.
Dayactir la'aan iyo jawi bey'adeed.
Ma jiraan waxyaabo sun ah oo ku jira birta birta ah ee birta birta ah. Waqtigu markuu sii socdo, ma daxalmi doono oo ma beddeli doono. Sidaa darteed, looma baahna in la sii wado. Marka la rakibo, waa la isticmaali karaa weligiis.
Rakibidda mesh xarig Ferrule
Sawir cabbir xarig mesh ah
Qeexitaannada nooca muruqyada xargaha birta
Cabirro kasta oo caado ayaa la heli karaa.
Xoogga mesh fiilada
Dhexroor 1mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm
Xoog siligga (N / mm2) 1770 1770 1770 1570 1570 1570 1570 1570
Jebinta xamuulka (lbs.) AISI 304 180 270 360 630 1011 1371 2383 3731
Xoog siligga (Ft) 90lbs 112lbs 180lbs 315lbs 450lbs 539lbs 764lbs 1146lbs
Jebinta xamuulka (Fb) 315lbs 404lbd 517lbs 764lbs 877lbs 989lbs 1281lbs 1573lbs
Hore: Gacan-gashiyada Chainmail Gacmahaaga Nabad Gel
Xiga: Ahama mesh Xadhig Xadhig leh Nolol Adeeg Dheer